Abadayisi beGelatin edliwayo nabahlinzeki - China Ifektri edliwayo yaseGelatin
I-gelatin yokudla isetshenziswa kabanzi embonini kaswidi. Enye yazo ukuthi isebenza njengomthombo wemvelo wamaprotheni, futhi inemisebenzi eminingi efana ne-gelatinous, foaming, emulsifying and locking water. Le misebenzi ibaluleke kakhulu ukuhlangabezana nezidingo zokukhiqiza uswidi. Ngaphezu kwalokho, i-gelatin nayo inezici zemizwa "ezisobala" kanye "nokunambitha kokungathathi hlangothi", okungahlangabezana nezidingo zabathengi ngombala nokunambitheka koswidi. Izici ezibonakalayo zinganikeza ukubukeka kwe-gummy gummy. IGelatin ayinanambitheka ekhethekile, ngakho-ke ungayisebenzisa ukwenza zonke izinhlobo zemikhiqizo yokunambitheka, efana nochungechunge lwezithelo, uchungechunge lwesiphuzo, uchungechunge lukashokholethi, nochungechunge olunosawoti nokunye.
Ukuqedwa kwe i-gelatin yokudla kungenziwa ngezinyathelo ezimbili. Isinyathelo sokuqala ukwenza ifayela le-i-gelatin yokudla umunce amanzi futhi wandise cishe imizuzu engama-30 emanzini abandayo abilisiwe. Isinyathelo sesibili ukufudumeza amanzi (ngemuva kokubilisa nokupholisa kube ngu-60-70 ℃) kokunwetshiwei-gelatin yokudla noma uyishise ukuze wenze i- i-gelatin yokudla chaza isisombululo se-gelatin esidingekayo.
I-Bovine Gelatin ikhishwe esikhunjeni / ethanjeni lezinkomo, isetshenziswa kakhulu embonini yokudla.
Ingulube Gelatin ingasetshenziswa yodwa noma ihlanganiswe namanye ama-colloids ekukhiqizeni i-confectionery. Njengoba i-gelatin powder edliwayo, i-gelatin yezinkomo isetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni ama-gel candies, ushukela oyisisekelo sotshwala, ushukela we-yogurt, ushukela we-licorice, izithelo ezinoshukela waseSwitzerland neminye imikhiqizo.
IGelken njengomkhiqizi we-gelatin ochwepheshe, anganikeza i-Halal gelatin ngesitifiketi esigcwele. Futhi sigxila kwi-Halal gelatin iminyaka eminingi. Imakethe enkulu ye-halatin gelal yethu isemhlabeni wonke, ikakhulukazi eNdiya, eVietnam, eThailand njalonjalo. Esikuphishekelayo ukwenza imikhiqizo yethu ibe ngehamba phambili.
I-gelatin eyi-Halal, kusho ukuthi i-gelatin yakhiqizwa ngaphandle kwemikhiqizo esekwe nge-porcine
Njengoba i-gelatin yebanga lokudla, halal i-gelatin icebile ngezinhlobo eziyi-18 zama-amino acid adingekayo emzimbeni womuntu. I-gelatin eyi-Halal isetshenziswa kakhulu embonini yokudla futhi iyisithako sokudla esezingeni elifanele.
Abantu abaningi basebenzisa i-gelatin ye-marshmallow. Njengobai-gelatin ye-marshmallow, Izinto zalo zokusetshenziswa isikhumba, ithambo, imisipha, imisipha kanye nezinga lezinkomo ezintsha, izingulube, izimvu nezinhlanzi ezinikezwa ngamadela, amafektri enyama, amakani, izimakethe zemifino, njll. Umkhiqizo we-gelatin umhlophe noma uphuzi ngokukhanyayo, i-translucent futhi icwebezela noma i-powder. Kuyinto engenambala, engenambitheki, engashintshashintshi, ebonakalayo futhi enzima engeyona okristallini.
I-Gelatin ngoswidi we-gummy isithako esibalulekile nesengezo embonini yokudla. I-gelatin edliwayo ivame ukusetshenziswa njenge-thickener yokudla, i-gelling agent, i-stabilizer, i-emulsifier ne-clarifier kwimikhiqizo yenyama, amakhekhe, u-ayisikhilimu, ubhiya, i-jelly, imikhiqizo ekheniwe nemikhiqizo yejusi.i-gelatin ngoswidi we-gummy. I-gelatin edliwayo uphuzi ophaphathekile, ongenasiphunga, ongenambitheka, onamanzi amaningi futhi oyimbudumbudu. I-Gelatin ngoswidi we-gummy ikhishwa ezimpahleni / emathanjeni amasha, angacutshungulwanga, futhi iphrotheni ephezulu yesisindo (ngaphandle kwamafutha ne-cholesterol) enama-amino acid ayi-18.
Ngokusho kwe-mesh, i-gelatin edliwayo ingahlukaniswa yaba izingxenye ezinhlanu ngezansi:
I-Gelatin 8 mesh,
I-Gelatin 60 mesh.
Ingulube yengulube, ihlukaniswa njengokudla kwemvelo, okuqukethe ama-amino acid abalulekile. I-gelatin yethu yengulube iyiprotheni eligayeke ngokuphelele elifanele ukusetshenziswa ngabantu.